Ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ laser chiller, mmiri chiller na-emepụta nri | S & A Chiller
Njikwa okpomoku zuru oke maka usoro nke Laser na ngwa ọrụ kemgbe 2002
Usoro mmepụta ihe na-arụ ọrụ chiller
Mmiri jụrụ chiller
Akụkọ Industrylọ ọrụ
Nchọpụta nsogbu chiller
Industrial laser jụrụ na njikwa okpomọkụ
Afọ iri abụọ na-eme nke ọma
S&A E guzobere chiller na 2002 na afọ 20 nke nzụlite mmepụta ahụ, ma amata dị ka onye ọsụ ụzọ na-ajụ oyi na onye a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ laser. S&A Chiller na-anapụta ihe ọ na-ekwe nkwa - na-enye arụmọrụ dị oke elu, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ume ike na-agba mmiri nke ọma.
Anyị na-enwekwu chiiz mmiri dị mma maka ngwa ọrụ mmepụta ọrụ dịgasị iche iche. Na maka ngwa laser karịsịa, anyị na-azụlite ahịrị nkeNdị ọzọ na-agbanye mmiri na-agba mmiri, sitere na ngalaba dị elu iji rụọ ọrụ dị elu, site na ike dị ala ruo na usoro ike, site na usoro kwụ ọtọ.
Anyị na-enyere ndị ahịa aka n'ihe karịrị mba iri ise iji dozie nsogbu ndị ha ji igwe na-enwekarị nkwalite ngwa ngwa, ihe ọhụụ na-aga n'ihu na nghọta nke ndị ahịa chọrọ ......
S&A Chiller na-anapụta ihe ọ na-ekwe nkwa - na-enye arụmọrụ dị oke elu, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ume ike na-agba mmiri nke ọma.
Systerlọ Ọrụ Chicker CW-6000 3KW Ike Ike 5 ruo 35 Celsius Station
Rack Ugwu Chiller Rmfl-1000 maka 1000w Ogweaka ịgbado igwe laser
Mmiri jụrụ Chiller CW-6210 ọrụ dị jụụ ± 0.5 Celsius C Sughee
CWLILRARIAL CWLERER CW-5000 maka iko co2 laser
Mpempe akwụkwọ chillerble CWLUP-20 maka ultrafast laser na uv laser ± 0.1 ℃ ℃ nkwukọrịta RS485
Nnukwu frizationlọ ọrụ mmepụta ọrụ dị ukwuu CWLFL-12000 maka 12KW fiber Laser
Ịbụ onye ndu nke akụrụngwa nke friji zuru ụwa ọnụ
Anyị na-eme ihe karịrị ịre ngwaahịa a
Anyị na-enye nkwado ndị ahịa 24/7 ma na-elekọta mkpa ndị ahịa ọ bụla site na inye ndụmọdụ mmezi bara uru, ntuziaka ọrụ na ndụmọdụ na-agbapụ ma ọ bụrụ na malfunction na-eme. Maka ndị ahịa Courice, ha nwere ike ịtụ anya ozi obodo na Russia, UK, Poland, Mexico, Singapore, bụ Korea na Taiwan.
Obula S&A Chiller anyị napụtara ndị ahịa anyị nke ọma na mmiri na-adịgide adịgide nke nwere ike ichebe chiller site na mmiri na-awagharị na ọnọdụ zuru oke mgbe ọ bịarutere n'ebe ndị ahịa.
Kedu ihe kpatara họrọ US
S&A E guzobere chiller na 2002 na afọ 20 nke nzụlite mmepụta ahụ, ma amata dị ka onye ọsụ ụzọ na-ajụ oyi na onye a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ laser.
Kemgbe 2002, S&A A raara chiller nye na-anọ nkeji ezumike ma na-eje ozi dị iche iche, ọkachasị ụlọ ọrụ laser. Ahụmahụ anyị na nkenke na-enyere anyị aka ịma ihe ịchọrọ na nke dị mma ị na-eche ihu. Site ± 1 ℃ to ± 0.1 ℃ ℃ ngọngọ, ị nwere ike ịchọta chiller mmiri kwesịrị ekwesị mgbe niile maka usoro gị.
Iji mepụta ndị ọzọ na-egwu mmiri nke kacha mma, anyị webata akara dị elu na ntọala mmepụta 18000m2 anyị wee guzobe alaka ụlọ ọrụ, compressor& Mmanye nke bụ ihe bụ isi nke chiller mmiri. Ikike mmepụta afọ na-eru ugbu a ruru 100,000 ha nkeji kwa afọ.
Njikwa dị mma
Ogo bụ ihe kachasị anyị mkpa ma ọ na-aga n'usoro mmepụta ahụ dum, site na ịzụta akụrụngwa na nnyefe chiller. A na-anwale chiller anyị na nyocha dị n'okpuru ebe a na-ebu ibu dị ọcha na ọ na-eme ka OA, ROHS ma rute ụkpụrụ nke akwụkwọ ikike 2.
Anyị na-anọkarị gị mgbe niile
Ndị otu ọkachamara anyị na-arụ ọrụ gị mgbe ọ bụla ịchọrọ ozi ma ọ bụ enyemaka ọkachamara banyere chiller. Anyị guzobere isi okwu na Russia, UK, Poland, Mexico, Gardepore, Korea, Korea na Taiwan iji nye ndị ahịa Creater.
S&A Chiller na-eme ụfọdụ ngwaahịa dị mma, nnukwu ojiji maka oyi gbadata lasers ma ọ bụ ọbụna ngwa ndị pụrụ iche dị ka idobe CPU dị ala.
- site na U.S. Onye ahịa
Ejirila mS&A Chillers maka mmadụ abụọ n'ime ọrụ laser m, ha na-arụ nnukwu ọrụ. Na ajụjụ m zara ngwa ngwa.
- site na onye ahịa Australia
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, degara anyị akwụkwọ
Naanị hapụ email ma ọ bụ nọmba ekwentị gị na mpempe kọntaktị ka anyị nwee ike inye gị ọrụ ndị ọzọ!
Faksị: + 86-20-84309967
Copyright © 2021 S&A Chiller - Ikike niile echekwabara.